निलो र कालो झगडा गरेका हुन कि क्या हो? हि हि हि
मान्छेले के के पत्ता लाउछन कुन्नी?
तर त्यो निलो गैडा हेर्दा त सारै कुल छ है!
सर्प भने पछि त जहिले पनि डर लाग्छ, के कती सर्प अझै बाकी रहेछन पत्ता लगाउन ?
साँच्चै यसको सिंग त गैंडाको खाग जस्तै देखिन्छ । हाम्रो देशमा पुगेको भए यस्को सिंग पनि "लघु गैडा" को खाग भनेर तस्करहरुले बेचिसक्थे ।